Wararka - Adeegsiga iyo dayactirka tuubada baabuurta
Isticmaalka iyo dayactirka tuubada baabuurta
Sida isku xirnaanta biibiile dabacsan, tuubada qaboojiyaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa kaydiyaha cadaadiska baabuurta iyo kuleylaha kaabayaasha ah. Si loo hubiyo in qaboojiyaha si habsami leh ugu qulqulo jirka kala -duwanaanta iyo waalka, geedka qariibka ah ee qaab -dhismeedka kanaalka hoose ee laanta badan ayaa lagu qaatay tuubada qaboojiyaha. Tuubada qaboojiyaha waa inaysan buuxin oo keliya shuruudaha shaqada, cabbirka qaab -dhismeedka iyo waxqabadka, laakiin sidoo kale waa inay si buuxda ula jaanqaaddaa qolka mashiinka oo leh qaab -dhismeed aad u adag oo isku -dhafan.
Iska daa saamaynta naqshadeynta, shucaaca heerkulka sare iyo dhejinta saliidda ee mishiinka ayaa sidoo kale ka dhigi kara dibedda gabowga tuubada qaboojiyaha. Laakiin si kastaba xaalku ha ahaadee, gabowga ugu badan wuxuu ka yimaadaa gudaha. Sidaa darteed, marka ay jiraan godad yaryar oo dibedda ah, waxay tilmaamaysaa in daxalka daran uu ka dhacay gudaha tuubada. Kanaalka xirashada ayaa ah natiijada korantada kiimikada iyo ifafaalaha dabiiciga ah ee saamaynta batteriga micro ee nidaamka qaboojinta. Ogsijiin hawada ku jirta ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee keena falcelinta kiimikada, sidaa darteed hagaajinta habka buuxinta ee nidaamka qaboojinta ayaa si wax ku ool ah uga fogaan karta dhacdooyinka shilalka noocaas ah.
Marka ay jirto dillaac weyn oo qaboojiyaha, qaladku waa iska caddahay marka la eego. Si kastaba ha ahaatee, furaha dhibka ayaa ah sida loo ogaado daxalka ku jira gudaha tuubada iyada oo aan la kala bixin. Hababka soo socda ayaa kaa caawin kara inaad si dhaqso leh oo sax ah u hesho tuubada qaboojiyaha dhimanaya: gacanta ku duub tuubada, gaar ahaan tuubada ku jirta qaybta sare ee hiitarka, dhaafitaanka, kala duwanaanta, jirka waalka iyo kululeeyaha, iyo dhammaadkiisa isku xirka ayaa ugu muhiimsan. Haddii ay jirto jilicsanaan jilicsan oo aan muuqan oo ku taal meesha wax lagu cajiinaayo (marka la barbar dhigo qaybaha kale), waxay tilmaamaysaa in tuubada meeshan si xun u daxalaysatay. Haddii masaafada gaadhigu ay hooseyso waqtigan, waxaa lagu talinayaa in la hubiyo danabka nidaamka qaboojinta. Inta lagu jiro kormeerka, cirifka taban ee voltmeter -ku wuxuu ku xiran yahay korontada dhulka ee batteriga; Geli tiirka togan qaboojiyaha (ha taaban wax bir ah). Haddii akhrinta danabku ka sarreyso 0.3V, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo kormeer dhammaystiran oo nidaamsan oo ku saabsan korantada dhulka ee gaariga oo dhan. Isla mar ahaantaana, hubso in aysan jirin koronto -ku -dhejiye ku -xidh oo kaabayaal ah oo ku xiran bareeraha hiitarka.
Si loo maro marinka tuubada dabacsan, xitaa haddii ay jirto hal dillaac oo laan ah, waa xikmad in la beddelo tuubada qaboojiyaha oo dhan, haddii kale waxaad heli doontaa laba jeer natiijada nus dadaal.
In kasta oo tuubbooyinka badankooda si dabacsan loogu rakibi karo bilaa xirmooyin, habka wax -ka -beddelidda waxaa loo qaatay ku dhowaad dhammaan tuubbooyinka sababtoo ah tuubada wax -ka -qabadku waxay aad ugu habboon tahay baahiyaha meel bannaan oo rakibidda is haysta.
Qabashada OEM ee tuubada qaboojiyaha badanaa waxay qaadataa qaab dhismeedka gu'ga. Giraanta dabacsan ee laastiigga ah waxay sababtaa isku -buuq joogto ah gudaha tuubada, si loo ogaado xiriir aad u adag oo leh cadaadis joogto ah oo lebis ah. Si kastaba ha noqotee, marka dhammaadka xiriirka tuubada la jeexo ama la qalloociyo, waxqabadka shaabadaynta ee xajinta laalaabka ee OEM uma fiicna haynta dayactirka oo tayo sare leh. Xirmooyinka dayactirka badiyaa waxaa ka mid ah koox yareyneysa oo si joogto ah u hagaajin karta xoogga cadaadiska iyo nooca dirxiga oo leh xiisad joogto ah. Waxaa ka mid ah, haysa ku -xigeenka marawaxadda waxay ku wareegi kartaa 360 digrii hareeraha wareegga. Cadaadis isku mid ah ayaa laga soo saaraa jihada boollada, iyo isku halaynta isku xidhka adkaynta waxaa lagu hubiyaa isku -buuqa joogtada joogtada ah ee ay soo saarto isku -duubnidu. Xirmada tuubada oo leh waxqabad sare ma ka hortagi karto oo keliya daadinta qaboojiyaha, laakiin sidoo kale waxay si weyn u yareysaa xaddiga hawada la nuugo inta qaboojinta matoorka.